Ungashanyira sei Saudi Arabia kubva kuUAE, South Africa, Argentina zvakare?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Saudi Arabia Kuputsa Nhau » Ungashanyira sei Saudi Arabia kubva kuUAE, South Africa, Argentina zvakare?
nhandare yendege • Argentina Breaking Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • South Africa Breaking News • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UAE Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Saudi Arabia inosimudza kumwe kurambidzwa kwekufamba
Iyo yakambovharwa uye isinganzwisisike Humambo hweSaudi Arabia ikozvino inozivikanwa kuti ndiyo inonyanya kushanya nyika inoshamwaridzika nyika.
Nyika iri kutora kumberi pamberi pehutungamiriri hwepasi rose hwekushanya.
Nhasi iro Ministry of Interior yeSaudi yakasimbisa kuti ichavhurazve Humambo kumuvakidzani wayo, United Arab Emirates, kuSouth Africa, uye kuArgentina.
Kufamba kuchabvumidzwa zvakare pakati peHumambo hweSaudi Arabia neUnited Arab Emirates, South Africa, neArgentina kubvira Chitatu, Gunyana 8. Nyika idzi dzakangobviswa pakufamba kwehumambo "runyorwa rutsvuku."
Sarudzo yekubvisa kurambidzwa kwekufamba yakavakirwa pakuwongorora mamiriro azvino COVID-19 muhumambo, Ministry yakatsanangura.
Bazi rezvemukati rakati nzira yekumisa hutachiona hweECVID-19 kupararira yaive yekuenderera mberi nekushandisa nzira dzekudzivirira, dzakadai sekuvhara maski, kuremara munharaunda, uye kushambidzika.
Kubva nhasi, Chipiri, Gunyana 7, 2021, pakanga paine mazana masere nematatu emakesi eCOVID-138 uye vamwe vanhu vatanhatu vakafa necoronavirus. Kusvika pari zvino, makesi mazana mashanu nemakumi mashanu ane makumi mashanu nemashanu akataurwa uye vanhu vanosvika zviuru makumi masere nepfumbamwe vakafa.
Zviri kuitwa nehumambo izvozvi
Parizvino, Saudi Arabia iri kukurudzira mushandirapamwe wekudzivirira hutachiwana hwe70% yehuwandu hwakazadziswa zvakakwana. Parizvino, nyika yawana 45% yakazara majekiseni uye 63% vakagamuchira muyero wekutanga. Hurumende inotarisira kuzadzisa dziviriro yemombe kutanga kwaMbudzi.
Pamusoro pechirongwa chayo chekudzivirira, nyika yakagadzira nzvimbo dzekuyedza uye nzvimbo dzekurapa, zvichibatsira mazana ezviuru zvevanhu.
Ingori mwedzi-nehafu yapfuura
Pakupera kwaChikunguru 2021, Saudi Arabia yakanga yagadza makore matatu kurambidzwa kufamba kune vagari vayo kana vakatyora zvakarambidzwa uye voenda kune chero nyika dziri pa "runyorwa rutsvuku" rwehumambo. Pamusoro pekurambidzwa kwekufamba kwemakore matatu, zvirango zvinorema zvaizoiswa pasi pakudzoka.
Inosanganisirwa pane runyorwa rwekurambidzwa kwekufamba yaive nyika dzichisimudzwa mangwana - UAE, South Africa, neArgentina.
Chii chinodiwa kuti uende kuSaudi Arabia?
Kubva muna Nyamavhuvhu 1, 2021, Saudi yakavhurika vachengetedze vashanyi vekunze kufamba pavisa visa. Vafambi vanodawo kuve neCOVID-19 inishuwarenzi vachiri muhumambo. Mari yeinishuwarenzi iyi ichaverengerwa mumubhadharo wevisa yevashanyi. Kuti utarise kukodzera kwenyika muchirongwa cheEVisa nekutarisa zvakanyorwa pane VisaSaudi peji. Nyika dzese dzisina kunyorwa dzinogona kunyorerawo vhiza yevashanyi kuburikidza nepedyo Embassy yeSaudi Arabia kuburikidza www.mofa.gov.sa
Vese vashanyi vanosvika munyika vaine vhiza yekushanya inoshanda vanofanirwa kupa humbowo hwakazara weimwe majekiseni mana anozivikanwa: madosi maviri eOxford / Astra Zeneca, Pfizer / BioNTech kana Moderna majekiseni, kana imwe chete mushonga naJohnson naJohnson.
Vashanyi vakapedza maviri madhizaini eSinopharm kana Sinovac majekiseni anozotambirwa kana vakagamuchira imwe dosi yeimwe yeanomwe majekiseni akatenderwa muHumambo.
Saudi Arabia ya yakavhura webhusaiti portal kuti vashanyi vanyorese yavo yekudzivirira. Nzvimbo iyi inowanikwa muchiArabic neChirungu.
Vafambi vanosvika muSaudi Arabia vanofanirwa zvakare kupa yakaipa PCR bvunzo isina kutorwa anopfuura maawa makumi manomwe nemaviri vasati vaenda uye chitupa chakabvumidzwa chekubaiwa mapepa, chakasimbiswa nevakuru vehutano munyika inoburitsa.
Iko hakuna kudzivirirwa kwega kwega kwevanodiwa vafambi kuenda kuSaudi.
Vese vafambi vanopinda pane yakambobuditswa vhiza yekushanya vanozodikanwa kubhadhara imwezve mari yeSAR 40 kunhandare yekusvika kwavo kuti vabhadhare inishuwarenzi kune chero COVID-19 inoenderana nemari yekurapa.
Vafambi vanorayirwa kuti vatarise izvo zviripo zvekupinda nezvinodiwa nendege yavo vasati vatenga tikiti.
Ndiani achiri pa "red rondedzero?"
Kutora nyika nhatu kuti dzibviswe paurongwa mangwana, nyika dzinotevera hadzikwanise kuenda kuHumambo.
Kuti uwane mamwe mashoko, taura help.visitsaudi.com.